Ny fifaliako... - Le blog de midera
Publié le 26 février 2009 par midera
Mandalo lalan-tsarotra sy toa mideza izaho sy ny ankohonako amin'izao fotoana hanoratako izao, raha amin'ny mahaolombelona dia toa mahakivy , toa mampametram-panontaniana be ihany, toa maizin-kitroka ny lalana hombana.... ahoana ary izy ity Jesosy?
Azoko antoka anefa na eo aza izany rehetra izany fa miaraka amiko ny Tompoko, ato anatiko Izy ary manjaka eo amin'ny fiainako, ampy ahy ny fisiany , ampy hifaliako sy mampiadana ahy ny fitoerany eo amiko.
Tsy te hanontany akory aho hoe , inona re no anton'izao, ny hany fantatro dia izao velona ny Andriamanitro! ary eo an-tanany ny zavatra rehetra.
Faly be aho omaly raha nahazo antso an-tarobia avy any amin'ny namako iray , faly be aho satria noporofoin'i Tompo tamiko indray fa Andriamanitra miahy ny zanany rehetra Izy, ary tena tsy azo faritana sy sarom-pantarina ny fomba fiasany amin'ny olony, te hikiaka mafy aho hoe aleloia! nitombo ny finoako ary faly be aho satria tsapako tamin'ny resaka nifanaovanay fa nomen'i Jesosy aina vaovao ilay namako, nomeny fanantenana velona .....raha efa tao anatin'ny famoizam-po tokoa fotoana vitsy lasa izay. Tsara hianao Jesosy!
Tena adinoko daholo ny manavesatra ahy rehetra naheno izany aho, faly tena faly aho, izao vao tena tsapako fa ny fifaliako sy ny tena antom-pisiako ambony indrindra dia ny fahafantarako fa manana ny Tompo ny tiako rehetra (havako, namako) ......tsy misy dikany ny olana rehetra eo @ fiainana rehefa eo Jesosy , rehefa mijery ny voninahiny sy ny fahalebiazany.
Raha mbola tsy nanandrana hianao , dia manasa anao amim-pitiavana be aho hanandrana fa mamy ,tsara , kanto , tsy misy teny mahalaza ny fahatsaranio Jesosintsika io. Tsy hanenenanao!
Mba faly aho raha tsapanao izany zavatra tsapako izany, mba tiako koa raha tiako ny hanananao fiadanam-po, tsy fiadanana mandalo toy ny fanomen'izao hita rehetra izao, fa fiadanana maharitra mandrakizay!
Tena tian'i Jesosy anie hianao io e!
« Que ta volonté soit faite! retour »
Roger 09/07/2014 13:31
Dia faly miaraha anao amin'ny anaran'i Jeosy Kristy Tompo. Tena tiantsika mandrakariva ny Tompo. Izy dia tsy mampitondra izay tsy ho zakantsika olombelona, nefa ny tsirairay avy dia samy manana ny
anjara hazofijaliany avokoa. Ka izany hazofijaliana izany dia tsy tokony hampitanondrika antsika, fa tokony hampitraka satria io no zezika mampiroborobo ny fiainam-panahyntsika ihany koa. Ny teniko
dia ny hoe "Andramo ka izahao fa tsara Jehovah", ary Izy ihany koa no niteny sy nanambara fa Izy dia manana "téléphone" tsy mila hoe manana "crédit" izay vao afaka miantso azy izay efa hainysika
rehetra dia (Jeremia 33:3); ary hoy koa Izy hoe: "Mankanesa aty amiko hianareo izay miasa fatratra sy mavesatr'entana fa Izaho hanome anareo fitsaharana." Izany no manambara fa mbola miasa eo
amin'ny fianantsika ny Tompo. Koa dia herezo ny dia, fa ny Tompo momba antsika mandrakariva. Ary ny voninahitra anie dia ho Azy irery ihany.
castellani thierry 17/10/2009 22:15
andriamanitra raika avao no tokina
dissertation topics 07/08/2009 09:26
Malala 01/06/2009 21:41
Misaotra ny Tompo dia misaotra anao ihany koa manaiky ho fiasana eo ampela-tanany.
Tsy kisedrasendra no nahitako ity blog nao ity fa tena fomba nentin'izy Tompo hanitsy ny fomba fijery.
Marina tokoa fa tokony ho momba ny tenan'ny hafa ny tsirairay fa tsy momba ny tenany ihany.Efa ambaran'ny soratra masina ombieny ombieny ihany izany fa tamin'ity indray mandeha ity dia tamin'ny endrika hafa no nentiny nampahatsiahy ahy izany.
Misaotra dia mirary soa ho anao sy ny ankohonanao
nirina 25/05/2009 12:16
Très beau temoignage. Deraina sy omem-boninahitra ny Tompontsika. Tsara Izy ary mpanao ny Tsara. Izaho koa matoky tanteraka fa na inona na inona mitranga,rehefa eo Jesosy mandeha ho azy ny zava-drehetra.
Sendra nijery hira t@ internet aho no tojo ny blog nao. Ce n'est pas du tout du hasard mais c'est la volonté de Dieu qui veut me montrer tjs qu'Il est le Dieu d'amour.C'est vraiment reconfortant. Merci.